Yurub waxay heshay daruur shucaac ah Ruthenium 106 daruur | Saadaasha Shabakadda
Dhawaan Machadka Faransiiska ee Raadiyaha iyo Badbaadada Nukliyeerka (IRSN, Xarfaha hore ee magaceeda oo af Faransiis ah) waxay soo saareen bayaan kusaabsan daruur ay kujiraan Ruthenium 106. Suurtagal inay asal ahaan ka timid Ruushka ama Kazakhstan, kaasoo sii deyntiisa nuclide-ka shucaaca badanaa loo isticmaalo dawada nukliyeerka. Kahor intaadan sii wadin, waxaad muujineysaa in baaritaanka IRSN uu xaqiijinayo in uruurinta Ruthenium 106 ee laga ogaadey Yurub aysan laheyn wax cawaaqib ah oo ku saabsan caafimaadka aadanaha ama deegaanka.
Muddadii u dhaxaysay Sebtember 27 iyo Noofambar 13, saldhigyada Seyne-sur-Me, Nice iyo Ajaccio ayaa shaaca ka qaaday joogitaanka Ruthenium 106 ee raadadka. Idaacado kala duwan oo reer Yurub ah oo ku xirnaa IRSN ilaa Oktoobar 3 waxay xaqiijiyeen jiritaanka shucaaca. Natiijooyinka la helay illaa Oktoobar 6 waxay muujinayaan inay jirto hoos u dhac joogto ah Ruthenium. Dheeraad ah, ilaa Oktoobar 13, joojinta ogaanshaha aagagga Faransiiska. Goor dambe, hadda, waxay umuuqataa in raadadka Ruthenium aysan jirin, iyo hadda ka dib lama oga meel kale oo Yurub ka mid ah.
Falanqaynta kadib, aaggii ay ka dhici lahayd xoreynta ayaa laga heli doonaa Buuraha Ural. Sidaa awgeed, suurtagal maaha in si sax ah loo go'aamiyo waddanka "mas'uulka ka ah". Buuraha Ural ayaa xuduud la leh Yurub waxaana wadaaga Ruushka iyo Kazakhstan. Hay'adda Faransiiska, oo si dhakhso leh u meesha ka saartay inay ka imanayso nukliyeerka, ayaa qeexday inay dhacday toddobaadkii ugu dambeeyay ee Sebtember. Taas bedelkeed waxa ugu macquulsan ayaa ah inay ku guuldareysatay xarun daawo shucaac, meesha kama saareyso inay noqon karto mid ku fashilantay daaweynta shidaalka nukliyeerka.
Ruthenium 106 waa badeecada kala qaybinta atamka at aaladda nukliyeerka, sidaa darteed sii deyntiisa waligeed si dabiici ah uma dhacdo. Burburkii dayax gacmeedkii ay la socdeen Ruthenium 106 ayaa sidoo kale meesha laga saaray, tan iyo markii baaritaan ay sameysay Hay'adda Caalamiga ee Tamarta Atomiga lagu soo gabagabeeyay in uusan jirin dayax gacmeed ay ku jirto maaddadan uu ku dhacay dhulka.
Sii deynta cunsurkan waxay ahayd mid aad u ballaaran, waxaa lagu qiyaasaa inay u dhaxeysay 100 ilaa 300 teraBecquerel. Nasiib weyn oo aysan cidna wax yeelin. IRSN waxay tilmaamtay in siidaynta noocan oo kale ah, hadii ay ka dhici lahayd Faransiiska, ay u baahnaan lahayd daadgureyn deg deg ah oo kiiloomitir ah agagaarka goobta baxsadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Yurub waxay heshaa daruur shucaac ah Ruthenium 106 daruur
Daloolka lakabka ozone ayaa xasiliya markii ugu horeysay
Sidee loo sameeyaa nalalka woqooyi?